Madaafiicdii xalay lagu garaacay degmooyin ka tirsan Muqdisho oo la cambaareeyay – SBC
Madaafiicdii xalay lagu garaacay degmooyin ka tirsan Muqdisho oo la cambaareeyay
Posted by Webmaster on September 20, 2012 Comments
Madaafiicdan oo aan la xaqiijin Karin halka ilaa iyo iminka ay ka yimaadeen ayaa waxaa habeennimadii xalay lagu garaacay degmooyinka Shibis iyo Boondheere ee magaalada Muqdisho, waxaana ay dhaliyeen khasaarooyin farabadan oo dhimasho iyo dhaawac leh.
Dowlada Soomaaliya ayaa sheegtay in ay aad uga xuntahay khasaaraha ka dhashay madaafiicdaasi iyadoona dusha u saarisay xarakada Alshabaab oo ay sheegtay in ay leedahay masuuliyada mafaafiicdani.
Gudoomiye yaasha Degmooyinka ay madaafiicdani ku dhaceen ee Boondheere iyo Shibis iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ayaa cambaareeyay falkan iyaoona ku tilmaamay mid ay ka dambeeyaan xarakada Alshabaab islamarkaana ay ku geeriyoodeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan oo guryahoda hurtay.
Saqdhexe xalayto ayay ka warheleen dadka rayidka ah ee ku dhaqan degmooyinkaasi dhawaqa madaafiic kuwaasi oo ku hoobanayay guryahooda, waxaana inta laga warhayo ku geeriyooday 12qof halka labaatameeyo qofna ay ku dhaawacmeyn.
Xarakada Shabaab Almujaahidin ayaa iska fogeysay masuuliyada madaafiicdani iyadoo dhanka kale sheegtay in xalayto madaafiic xooglihi ku garaacday xarunta madaxtooyada dowlada Soomaaliya.